सवारीमा जोर–बिजोर, छुट्टाछुट्टै समय तालिकामा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने – Sandesh Press
सवारीमा जोर–बिजोर, छुट्टाछुट्टै समय तालिकामा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने
June 18, 2021 267
सीसीएमसीका कार्यकारी निर्देशक बा’लानन्द शर्माले एक सातामा दुई दिन बिदा हुने गरी निजी र सार्वजनिक सवारी–साधनमा जोर–बिजोर लागु गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारी कार्यालय र अन्य सीमित क्षेत्र खुलाउने निर्णय गरिएको बताए ।‘असार ७ गतेसम्मको को’रोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरिनेछ ।
त्यसपछि मात्रै कुन–कुन क्षेत्रमा के–के गर्न दिइने भन्नेबारे थप निर्णय गरिनेछ,” शर्माले भने ।गएको वैशाख १३ गते बाँकेबाट सुरु निषेधाज्ञा अहिले ७५ जिल्लामा जारी छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लोपटक असार ७ सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ ।कार्यकारी निर्देशक शर्माका अनुसार असार ७ पछि पनि निषेधाज्ञालाई नै निरन्तरता दिइनेछ ।
‘‘असारपछि पनि लकडाउनलाई नै निरन्तरता दिई को’रोना संक्रमणदरको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिनेछ । त्यसैअनुरुप स्वास्थ्य मा’पदण्डमा क’डाइ गरी चरणबद्ध रुपमा लकडाउन खु’कुलो बनाउँदै लगिनेछ,” उनले भने ।शर्माका अनुसार अब अन्य व्यापार, व्यवसाय खुलाउन दिइनेछ ।
‘‘अहिले जारी निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल, तरकारी पसलहरु खुलाउन दिइएको छ । तर, असार ७ पछि भने यस्तो हुने छैन । स्मार्ट लकडाउन जारी भएपछि विभिन्न किसिमका पसलहरु खोल्न दिइनेछ,” शर्माले भने, ‘‘यसका लागि समय तोकिनेछ ।
खाद्यान्न पसललाई ९ बजेसम्म खोल्न दिने गरी समय तो’किनेछ । कपडा पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल १० देखि १२ बजेसम्म खोल्ने समय मिलाइनेछ । त्यस्तै, हार्डवेयर पसल १ देखि ४ बजेसम्म खोल्न दिइने समय तालिका बनाइनेछ । विकास निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योग स्वास्थ्य मा’पदण्ड पालना गरी खोल्न दिइनेछ ।”
बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सीसीएमसीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले निषेधाज्ञालाई ‘स्मार्ट लकडाउन’मा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो ।बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संक्रमण नबढ्ने गरी खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए । स्वास्थ्य मापदण्डमा क’डाइ गर्दै च’रणबद्ध रुपमा ज’नजीवन सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।
Prevमेलम्ची पुग्दा कल्पना दाहालको रुवाबासी, पिडितको बयानले आखाभरी आँशु (भिडियो)
Nextकाठमाडौं बासीहरुको लागि आयो खुसीको खबर ! पाउने भए २५ हजार रुपैयाँसम्म छुट
काठमाडौँ उपत्यकामा भोली देखि अत्यावश्यक पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर १० बजे सम्म खुल्ने
सातामा दुई दिन बिदा, बजार खोलिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने
काठमाडौंमा २० जेठसम्म थपियो निषेधाज्ञा
के तपाईको जीवनमा साढे सातको सनि दशा छ? यस्तो गर्नुहोस् उपाय, तत्काल मिल्नेछ लाभ